Webinars Ahịa | Blog Ahịa Blog
Wenezde, August 19, 2020 Tuesday, August 18, 2020 Ravi Chalaka
MQM bụ ego azụmaahịa ọhụrụ. Nzukọ ndị ruru eru na-ere ahịa (MQM) na atụmanya na ndị ahịa na-eme ka ire ahịa na-aga ngwa ngwa ma mụbaa pipeline enweta ego ka mma. Y’oburu n’itughi digi ozo nke ihe ahia gi n’eme ka ndi ahia gi merie, o bu oge itughari ohuru ohuru. Anyị abanyela na mgbanwe mgbanwe egwuregwu site na ụwa nke ndị MQL gaa ụwa nke mkparịta ụka-njikere na-eduga bụ isi ahịa azụmaahịa. Na
Ọ na - esiri gị ike ịmepụta ndu? Ọ bụrụ na ị zara ee, ị gaghị anọ naanị gị. Hubspot kọrọ na 63% nke ndị na-ere ahịa na-ekwu na ịmepụta okporo ụzọ na ụzọ bụ isi ịma aka ha. Mana ị nwere ike ịnọ na-eche: Kedu ka m ga - esi wee nweta ahịa m? Ọ dị mma, taa a ga m egosi gị otu esi eji ahịa ọdịnaya ewepụta azụmaahịa gị. Marketingre ahịa ọdịnaya bụ usoro dị irè ị nwere ike iji mepụta ndu